PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - ILadysmith Utd nephupho lePSL
ILadysmith Utd nephupho lePSL
Azogadulisana kwiNedbank Cup aweMotsepe League
Ilanga - 2017-09-14 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UNEPHUPHO lokuletha imidlalo yePremier Soccer League (PSL) esifundeni sasoThukela uJabulani Mdlolo ongumnikazi weLadysmith United ezimisele ngokudla ubhedu kwiSouth African Football Association (Safa) KwaZulu-Natal ABC Motsepe League ukunyukela kwiNational First Division (NFD) ngesizini ezayo.
Nakuba le kilabhu isanda kusungulwa ngokuthengwa kweMaJuba United Killers kaGift Dlamini, kodwa uMdlolo obambisene noSiphiwe Hadebe kwiLadysmith, uthi bazimisele ngokubona ibhola elikhokhelayo ligijinyelwa oThukela phambilini oluke lwamelwa wuThukela FC kwiNFD.
Lezi zikhulu zithi okuzenza zibe neqholo lokubona le kilabhu ingena kwiNFD eyisigaba esincane sePSL, wukuthi bagijima nangabadlali abanesipiliyoni sokuyibamba kwi-Absa Premiership kubalwa uDiyo Sibisi ogcugce emakilabhini amaningi amakhulu kubalwa kwiMaritzburg United, yiFree State Stars, yiMamelodi Sundowns ne-Ajax Cape Town ukubala ambalwa.
Le kilabhu ifakwe kwiGroup A emidlalweni yokuhlungela ukungena kwiNedbank Cup Last 32 ezokuba ngoMgqibelo ezinkundleni ezahlukene. Kuleli qoqo iLadysmith izovula neDrakensburg esizokwaziwa ngelePhenduka FC emdlalweni ozoqala ngo-10h00 eKing Edward Park, eGreytown, kuthi uMvoti FC ugadulisane neMaritzburg City ngo-12h00. Abanqobile bazokhipha ingqwele yosuku ngo-16h00.
KwiGroup B kuzovula iSes’khona neDurban FC ngo10h00 eSJ Smith Stadium, eWema, kuthi ngo-12h00 kubhekane i-Ashley United neKwaMashu All Stars. Owamanqamu kaGroup B uzogijinywa ngo-16h00.
KwiGroup C kuzovula iGWP Friends ne-Edendale Juventus ngo-10h00 kuthi iSummerfield ishukane neHappy Wanderers ngo12h00 bese owamanqamu ugiji- nywa ngo-16h00.
EkaGroup D izodlalelwa eDarnall Grounds lapho iNatal United izodlala neMilford FC ngo-10h00 kuthi iKwaDukuza United ibhe- kane neNatal ngo-12h00 bese iMilford ivala ngeKwaDukuza ngo16h00 kwazise amakilabhu alesi sigaba kawaphelele njengoba iMageba Warriors isalwa neMa- nzimtoti Academy ngozomela iTheku emidlalweni yokuhlungela ukungena kulesi sigaba se-ABC Motsepe League.